Anyị emeela nkwa iji nye ọnụego asọmpi, ngwa ahịa dị mma dị mma, nnyefe ọsọ ọsọ maka ọnụahịa ọnụahịa China High Quality Screen Ihicha ogbe maka ihuenyo Ihicha Ihicha, ị kwesịrị ịnwe ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịdebe zụrụ ihe mbụ ijide n'aka na ị ga-ala azụ oge ọ bụla ịkpọtụrụ anyị.
Discountable price China Screen Ihicha ogbe, Silk Screen Ihicha ogbe maka Screen biri ebi mkpụrụ, Anyị nwere 48 n'ógbè ụlọ ọrụ na mba. Anyị nwekwara ezigbo ụlọ ọrụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ofesi. Ha na-etinye anyị n'usoro ma na-ebupụ ngwa ahịa na mba ndị ọzọ. Anyị na-atụ anya ịkwado gị ịzụlite nnukwu ahịa.
Anyị adịla njikere ịkọrọ anyị ihe ọmụma anyị banyere ịkwalite ụwa niile ma kwado gị ngwaahịa ndị kwesịrị ekwesị na ọnụ ahịa ahịa kacha ike. anyị na-na na na na na njikere iji mepụta High arụmọrụ UV draya na UV ikanam draya maka UV mkpuchi na UV varnish, Anyị ji obi ụtọ na-anabata ndị na-azụ ahịa si n'ebe nile n'ụwa n'ihi na ọ fọrọ nke nta ụdị ọ bụla nke imekọ ihe ọnụ na anyị na-eme a ibe uru ogologo oge. Anyị ji obi anyị niile na-enye ndị na-azụ ahịa ezigbo ọrụ.
Hot Sale maka China UV uringgwọ igwe, UV ikanam ịgwọ igwe, Ọ bụrụ na ihe ọ bụla nke nwere mmasị n'ebe ị nọ, biko mee ka anyị mara. Anyị ga-anwa ike anyị niile iji mejupụta ihe ị chọrọ site na ngwaahịa dị elu, ọnụahịa kacha mma na nnyefe ọsọ ọsọ. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla. Anyị ga-aza gị mgbe anyị natara ajụjụ gị. Biko rịba ama na nha ahaziri iche dị.
Ọganihu anyị dabere na akụrụngwa kachasị elu, talent ndị mara mma ma na-eme ka nkà na ụzụ dị ike maka Factory Customized China T-Shirt Screen Printing Flash draya / ordị Mpempe Mpempe Mbugharị, Na ọrụ pụtara ìhè na ezigbo mma, yana azụmaahịa nke azụmahịa mba ọzọ na-egosipụta ndaba na asọmpi, nke ndị zụrụ ya ga-atụkwasị obi ma nabata ma na-eme ndị ọrụ ya obi ụtọ.
Factory ngwaahia Flash draya, T-uwe elu ihuenyo ebi akwụkwọ draya, The imewe, nhazi, ịzụta, nnyocha, nchekwa, gbakọta usoro niile na nkà mmụta sayensị na irè akwụkwọ usoro, na-amụba ojiji larịị na ntụkwasị obi nke anyị ika miri, nke na-eme ka anyị na-elu soplaya. nke Screen obibi ihicha akụrụngwa ma nweta ndị ahịa ntụkwasị obi nke ọma.
A-co Akpa nke ngwa: Nke a akpaka 6 agba 12 ojii akpaka t-uwe elu ihuenyo ebi akwụkwọ igwe na ọtụtụ-eji akwa / uwe ihuenyo ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ, dị ka uwe, T-Chiefs na egwuregwu ákwà, akpa, ịkwanyere na na. Igwe nbipụta ihuenyo a kwesịrị ekwesị maka overprinting uwe. A na-ejikarị ya ekpuchi T-shirts, uwe, akpa azụ, akpụkpọ anụ, akwa, towel na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. tinyere 4 pec tere infrared ...
Ihicha kabinet ihuenyo
Anyị nwere ahụmahụ emeputa. N'ịbụ ndị meriri ọtụtụ n'ime asambodo ndị dị oke mkpa nke ahịa ya maka Mpempe Akwụkwọ Ahịa maka China maka ihicha ihuenyo, Anyị nwere ndị ọrụ nwere ahụmịhe maka azụmaahịa mba ụwa. Anyị nwere ike idozi nsogbu ahụ ị zutere. Anyị nwere ike ịnye ngwaahịa na azịza ịchọrọ. Kwesịrị inwe mmetụta nke n'efu ịgwa anyị okwu.
Price Sheet maka China Silkscreen ihicha Cabinet price, Anyị nwere ihe karịrị 200 mkpara gụnyere ahụmahụ oru, okike na-emepụta, ọkaibe injinia na ọkà ọrụ. Site na ọrụ siri ike nke ndị ọrụ niile maka afọ 20 gara aga, ụlọ ọrụ ha siri ike ma sie ike. Anyị na-etinye ụkpụrụ "onye ahịa mbụ" mgbe niile. Anyị na-emezukwa nkwekọrịta niile ruo n'ókè, yabụ nwee ọmarịcha aha na ntụkwasị obi n'etiti ndị ahịa anyị. Na-nnọọ na-eleta onwe gị ileta anyị company.We olileanya na-amalite a azụmahịa mmekorita na ndabere nke ibe uru na-aga nke ọma development. Maka ozi ndị ọzọ, egbula oge ịkpọtụrụ anyị ..
Igwe igwe nhicha
Anyị mgbe niile igbu anyị mmụọ nke ”Innovation eweta mmepe, Ukwuu-edu na-eme ka ụfọdụ akpata, Management mgbasa ozi na ahịa uru, Ebe E Si Nweta akara adọta ndị na-azụ maka Big Discount China Ofụri Esịt Automatic Screen saa Machine, We are going to provide most effective quality, nnọọ ikekwe ahịa kachasị ọnụ ahịa ugbu a, maka onye ọ bụla na ndị ahịa ọhụụ na oge ochie nwere ezigbo ngwọta gburugburu ebe obibi.
Nnukwu Ego China silk na-asa ákwà ụlọ ndozi, Silk Screen Printing Machine, anyị ngwọta nwere mba nzere ntozu chọrọ maka ruru eru, ezi mma ngwaahịa, oké ọnụ uru, nabatara site na ndị mmadụ n'otu n'otu n'ụwa nile. Ngwaahịa anyị ga-aga n'ihu na-emeziwanye n'ime iwu ahụ wee gosipụta n'ihu iji kwado gị, Maa ọ bụla nke ngwaahịa ahụ ga-achọ ịmata gị, gbalịa mee ka anyị mara. Anyị ga-enwe afọ ojuju inye gị nkwupụta okwu na nnata nke mkpa zuru ezu.
Igwe ikuku nkpuchi
Anyị nwere otu ndị na-arụ ọrụ nke ọma iji zaa ajụjụ site n'aka ndị na-azụ ahịa. Nzube anyị bụ “100% ahịa mmezu site anyị ngwaahịa elu-edu, price mkpado & anyị ọrụ ọrụ” na-enwe a ikenyeneke mbiet aha n'etiti klientele. N'ihe ufodu ulo oru ole na ole, anyi gha enye otutu ihe di iche iche nke Factory For China Micro Computer screen plate Exposure Machine for Screen Printing, Anyị ga-achọ inweta atụmanya a iji chọpụta mmekọrịta azụmahịa nke ogologo oge na ndị na-azụ ihe site na gburugburu ụwa.
Orylọ ọrụ maka China Silk screen Exposure Machine, Frame Exposure Machine, Ugbu a, anyị ọkachamara na-enye ndị ahịa nnukwu ngwaahịa anyị na azụmahịa anyị abụghị naanị "ịzụta" na "ire", kamakwa lekwasị anya na ndị ọzọ. Anyị lekwasịrị anya ịbụ ndị na-eguzosi ike n'ihe nye gị na ogologo oge na-arụkọ ọrụ ọnụ na China. Ugbu a, anyị nwere olile anya ịbụ ndị enyi gị.
Igwe na-agbatị igwe
Iji mee ka usoro nlekọta ahụ dịkwuo elu site na iwu nke "ezi obi, ezi okpukpe na ezigbo mma bụ ntọala nke mmepe ụlọ ọrụ", anyị na-etinye uche nke ọma isi ihe jikọrọ ngwọta na mba ụwa, ma na-ewepụta ngwa ahịa ọhụụ iji gboo mkpa ndị ahịa. Ahịa ụlọ ọrụ maka China Ce Standard Screen Mesh Stretching Machine, Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwongwo anyị niile, gbaa mbọ hụ na ị nweghị ụgwọ ọ bụla ịkpọ anyị maka akụkụ ndị ọzọ. Anyị na-atụ anya na-ekwenyere ndị ọzọ di na nwunye si n'akụkụ ụwa niile.
Factory Price N'ihi China Screen ndinyanade mbat Machine, Screen ntupu ndinyanade mbịne Machine, Anyị na-esi ọnwụ na ụkpụrụ nke "Ebe E Si Nweta ịbụ isi, Ahịa ịbụ eze na Quality ịbụ ndị kasị mma", anyị na a na-atụ anya na-arụkọ ọrụ ọnụ na ndị enyi niile n'ụlọ na mba ọzọ na anyị ga-emepụta ọdịnihu dị mma nke azụmahịa.
Ọ bụghị naanị na anyị ga-anwa ike anyị niile ịnye ụlọ ọrụ dị oke egwu na ndị ahịa ọ bụla, mana anyị dịkwa njikere ịnara ndụmọdụ ọ bụla ndị ahịa anyị na-enye maka inye OEM China Manual 8 Color 8 Station T-Shirt Screen Printing Machine, oge niile, anyị na-a payinga ntị na ozi niile iji kpuchie ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla nke ndị ahịa anyị nwere obi ụtọ.
Tụkwasịnụ OEM China Screen Printing Machine, 8 Agba Printing Machine, anyị nwetara zuru ezu ihe onwunwe mmepụta akara, gbakọta akara, àgwà akara usoro, na nke kasị mkpa, anyị nwere ọtụtụ nchọpụta Kemịkalụ technology na ahụmahụ oru & mmepụta otu, ọkachamara ahịa ọrụ otu. Na ndị a niile uru, anyị nwetara zuru okè mba aha nke ihuenyo obibi akwụkwọ, na-agbasa anyị ngwongwo niile n'akụkụ nke ụwa. Anyị anọwo na-aga ma na-anwa ike anyị iji jeere ndị ahịa anyị ozi.
Curved elu ihuenyo ebi akwụkwọ igwe
Co Akụkụ nke ngwa: A na-arụ ọrụ igwe obibi akwụkwọ a nke a na-ebipụta nke ọma iji bipụta na ihe ndị nwere cylindrical, cone na oval, dị ka karama plastik, iko, na ihe ndị ọzọ. Njirimara: 1. Advanced computerized system control 2. Wuru na-ikanam dijitalụ counter 3. Adabara maka ibi akwụkwọ na gburugburu, cylindrical, oval ma ọ bụ ewepụghị oru ngo 4. Pneumatically chụpụrụ usoro nke nwere ike ịgbanwe ngagharị ọsọ nke akụkụ nke ọ bụla 5. Nwere ike ịrụ ọrụ na ntuziaka na ọkara akpaaka mode ona dị iche iche na-arụ si sk ...
Co Akụkụ nke ngwa: Igwe ihe ntanetị a na-akpaghị aka elekere anọ na sistemụ akpaaka na-adabara UV na-ele mmadụ anya n'ihu, varnish niile, nyefe akwụkwọ, dashboard, mpempe akwụkwọ, kaadiboodu, mpempe akwụkwọ acrylic, akara ngosi okporo ụzọ, kaadị mmado, ihe mmado, akpụkpọ ahụ ịgbanwee na ụdị ihe niile na-anaghị emebi emebi ● Njirimara: 1) Ọ bụ 3/4 akpaka mmepụta akara nke na-azụ ihe iji ebi akwụkwọ site na aka mmadụ, wee wepụ ihe na-akpaghị aka .Ngwe a na-agbanwe agbanwe ma na-agagharị, nke na-eme ...
A-● Akpa nke ngwa: Ọ bụ a akpaka iko silk ihuenyo ebi akwụkwọ igwe mmepụta akara nke kwesịrị ekwesị n'ihi na akpakanamde iko / ụkpụrụ ụlọ iko / iko iko na ụdị nile nke nnukwu size iko silkscreen obibi akwụkwọ. Njirimara: 1) Igwe ihe ngebichi silk na-achịkwa site na aka + PLC, Site na ntinye na-akpaghị aka loading akpaghị aka silk ihuenyo ebi akwụkwọ printing na-akpaghị aka ibudata, Ruo mgbe ihicha ọwara, Ihe niile na-akpaghị aka ghọtara. 2) Nyefe ụzọ breeki moto nke mba ụdị ...
Tagless labeelu ihuenyo ebi akwụkwọ igwe
Ebumnuche anyị ga-abụ ịnye ndị ahịa anyị ezigbo mmekọrịta azụmahịa, na-enye ha nlezianya anya maka ha niile maka Professionallọ Ọrụ Ọkachamara nke China Garment Neck Label Screen Printer Manufacturer, Na-eguzo ruo taa ma na-ele anya n'ime ogologo oge, anyị ji ezi obi nabata ndị ahịa gburugburu ụwa iji kwado anyị.
Professional Factory maka China Tagless Screen Printing Machine, Label Silk Screen Printer, Anyị budata-ekwe nkwa na anyị na-enye ndị ahịa niile na nke kacha mma mma ihe, ndị kasị asọmpi ahịa na ndị kasị ngwa nnyefe. Anyị nwere olileanya imeri ọmarịcha ọdịnihu maka ndị ahịa na onwe anyị.
Glass Screen Printing Machine, Silk Screen Printing Machine, Silkscreen Printing Machine, Akpaaka Screen Printing Machine, Igwe Mbipụta Igwe, Ihuenyo Silk Printing Machine,